मन्त्रीको जवाफ नै चित्त बुझ्दैन सांसदलाई !
जनताको चाहानालाई मुर्त रुप दिन बोलाइने संसदीय समितिलाई सांसदहरुले नै वेवास्ता गर्न थालेका छन् । संसद्को बैठकमा मात्र होइन समितिको बैठकमा पनि प्रायजसो शीर्ष नेताहरुको उपस्थिती प्राय सुन्य देखिन्छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भन्ने गरिएको भएपनि संसादहरुले समितिलाई वास्ता गर्न छाडेका छन । संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएपछि र सबैको सहमति भएपछि मात्र विधेयक […]
मनाङ्गमा स्वयंसेवी रक्तदाता समाज गठन
मनाङ्ग । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा स्वयंसेवी शतक रक्तदाता प्रेमसागर कर्माचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा ङावल मनाङ्गमा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज मनाङ्ग जिल्ला शाखा गठनार्थ स्थानिय जन प्रतिनिधिका साथै स्थानीय एक भेलाको आयोजना गरि सम्पन्न गरिएको छ । साथै उक्त जिल्ला भेलाले स्थानिय स्वयंसेवी रक्तदाता मुखिया एन.लामाको संयोजकत्वमा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज मनाङ्ग जिल्ला […]
म तत्काल विश्राम लिन्नः सभापति देउवा
बर्दिया । नेपाली काँग्रेसका सभापतिएवं पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई आगामी चुनावमा देशको पहिलो पार्टी बनाएरै छाड्ने बताउनु भएको छ । प्रचण्ड र केपी ओली मिलेर आफुलाई धोकादिएको भन्दै उँहाले काँग्रेसलाई पहिलो पार्टी नबनाउँदासम्म विश्राम नलिने बताउनु भएको हो । नेपालीकाँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाले आयोजना गरेको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले अहिलेको सरकारले करमा […]
घुस सहित प्रहरी निरीक्षक पक्राउ
बर्दिया । अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले ३० हजार रुपैया घुस सहित ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखर बर्दियाका प्रहरी निरिक्षक गणेस सिंह महतालाई पक्राउ गरेको छ । आयोगको सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरवाट खटीएको टोलिले घुसलिदालिदै गरेको अवस्थामा प्रहरी निरिक्षक महता र स्थानिय सहयोगि मैया पौडेललाइ कार्यकक्षवाटै रंगेहात पक्राउ गरेको जनाएको छ । कार्यालयमा सोधपुछका लागि पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई […]
कृष्ण अाचार्य । चितवन । पटक पटक सर्दै आएको गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भएको छ । चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायधिश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले अधिकारी हत्या प्रकरणमा आज (आइतबार) फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैशला अनुसार १३ जना प्रतिबादी मध्ये १२ जनाले सफाई पाएको अदालतका श्रेस्तेदार गेहेन्द्रराज पन्तले जानकारी दिए । […]
आधिकारिक नेपालको नक्सा र निसान छापमात्र प्रयोग गर्न सरकारको निर्देशन
काठमाडौ । सरकारले नापी विभागले प्रकाशित गरेको आधिकारिक नेपालको नक्सा र निसान छापमात्र प्रयोग गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे मन्त्रालयले गलत नक्सा र निसाना छाप प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दे आधिकारिक नेपालको नक्सा र निसाना छापमात्र प्रयोग गर्न सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन दिएको हो । पत्रकार […]
बीपी कोइरालाको १०५ औँ जन्मजयन्ती मनाइंदै
काठमाडौँ । नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका तथा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको १०५ औँ जन्मजयन्ती आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको विसं १९७१ भदौ २४ गते जन्म भएको थियो । जहानिया राणा शासनको बिरोधमा उनका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरिब किसानले पहिरेको कपडा राणा प्रधानमन्त्री […]
हेलिकोप्टर दुर्घटनाका मृतकको शव ल्याइयो
काठमाडाैं । नुवाकोटको मैलुङ्गपाखाका शनिबार हेलिकप्टर दुर्घटनाहुँदा ज्यान गुमाएका ६ जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ । गोरखाको सामागाउँबाट काठमाडौँका लागि उडेको अल्टिच्युड एयरको इक्वेरल थ्री हेलिकप्टर शनिबार बिहान नुवाकोटको साबिक मेघाङ गाविस र हालको म्यागङ गाउँपालिका–१ बसुनचेत मैलुङ्गपाखामा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ६ जनाको ज्यान गएको हो । पाइलटसहित सातजना रहेकोमा एकजनाको भने जिवितै उद्दार गरिएको हाे […]
२ सय ३२ किलोमिटर यात्रा गर्न ३ दिन !
काठमाडौं । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि जुम्लासम्मको सडक दूरी २ सय ३२ किलोमिटर छ । जहाँ यात्रा गर्न अहिले ३ दिनको समय लाग्छ । सामान्यत अवस्थामा यो दुरी पार गर्न सडकमार्गबाट एक दिन पर्याप्त हुन्छ। वर्षात्का कारण कर्णाली राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा सुर्खेतबाट जुम्ला पुग्न अचेल कम्तीमा ३ दिन लाग्ने गरेको छ। ‘नाग्म […]